Pôrtô Rikô: Ny lahatsary antserasera ahitana ny hetsi-panoheran’ny mpianatry ny Oniversite · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 18 Mey 2018 4:07 GMT
Mbola nihamafy hatrany ny hetsi-panoherana naharitra iray volana manohitra ny fanapahana ny tetibola tao amin'ny Oniversiten'i Pôrtô Rikô, ary navitrika tamin'ny fanaparitahana hatrany ny vaovao tamin'ny alàlan'ny lahatsary antserasera sy ny media sosialy hafa ireo mpianatra nipetraka tao anatin'ny faritry ny oniversite Rio Piedras. Nanao fihetsiketsehana ireo mpianatra noho ny fepetra noraisina mikasika ny fanafoanana ny vatsim-pianarana ara-javakanto sy ara-panatanjahatena, ary koa ireo vatsim-pianarana ho an'ireo mpianatra mahay dia mahay amin'ny taranja akademika, izay nahatonga ny ankamaroan'ireo izay kely fidiram-bola tsy ho afaka hanohy fianarana ambony kokoa.
Niavaka sy nitohy noho ny fampiasana ny bilaogy sy ny media sosialy ho sehatra fifandraisana ity fihetsiketsehan'ny mpianatra ity. Nanokatra bilaogy, kaonty Twitter sy Facebook ary fampielezam-peo tamin'ny aterineto ireo mpianatra, mpanohana, sy mpanenjika ary naka lahatsary nifandraika tamin'ny fitokonan'ny mpianatra izay efa ho nandritra ny iray volana izy ireo. Nandray anjara lehibe tamin'ny famoahana vaovao momba ilay fitokonana ny fampitam-baovao nomerika hafa. Nanana sehatra hilazana ny fomba fijeriny, ny eritreriny, ary ny fihetseham-pon'izy ireo momba ny zava-nitranga tamin'izy ireo ny mpianatra sy ny vondron'olona hafa, izay tsy voatery niankina tamin'ny fampahalalam-baovao mahazatra.
Milaza amintsika izay nitranga tao anatin'ny Oniversiten'i Pôrto Rikô ny lahatsarin'ny olom-pirenena sasany. Ohatra, ity lahatsary manaraka avy amin'i Noelia González ity dia mampiseho ireo toerana avy ety ivelany nahitana ireo mpanohana ny hetsi-panoherana nanangona sakafo sy zava-pisotro hozaraina ho an'ny mpianatra tao anatiny. Mitondra antsika hitsidika ny manodidina ny toerana ihany koa ny mpianatra, anisan'izany ny toerana fisasana, ny toerana fanasan-damba ary ny fomba fanajan'izy ireo ny toerana mba ho madio hatrany. Any ivelany, matanjaka ny fanohanana, araka ny filazan'ny olona nanontaniana tao amin'ny vox-pop hoe: feno fampianarana ny fotoana nitrangan'ny hetsi-panoherana ary mijoro ho an'ny zon'izy ireo ny mpianatra.
Mampiseho ity horonantsary manaraka ity fa nisy ihany koa ny fanohanana avy any amin'ny tanibe Etazonia. Nanao diabe tao New York ny olona mba hanehoana ny fanohanany ireo mpianatra tao pôrtô Rikô sady nilanja sora-baventy sy ny teny famantarana:
Manome voninahitra ireo rehetra nanao hetsi-panoherana ity lahatsary manaraka avy amin'i Raymond O'Brien ity. Tsotra ny hafatra, Oniversite 1: vahoaka 1 , tsy misy teny ankoatra izay hilazana ny tantara. Fa nisy kosa ny sarin'ireo diabe ara-javakanto, ny parady , ireo mpianatra sy ireo mpianatra maintimolaly nihira sy nandihy ny fanohanany ny oniversitem-panjakana izay karakarain'izy ireo.
Nampiditra ny lahatsariny izay nanome voninahitra ny mpianatra ihany koa i Carlos Marcial ary nandefa izany tao amin'ny aterineto. Ao amin'ity lahatsary ity, naseho ny sombin-taratasy sy ny sora-baventy maromaro, izay mivaky hoe: “Ialana tsiny noho ny fanakorontanana , manangana oniversite ho an'ny daholobe izahay”
Nosoratana niaraka tamin'i Firuzeh Shokooh Valle ny lahatsoratra.